Onye ọ bụla chọrọ nnukwu ọrụ na agụmakwụkwọ ga-enyere ha aka ịga tere aka. Ka osi di, otutu ndi mmadu gha acho igbusi oge oru ya na ihe omuma ya. CMOAPI maara etu agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị dị, ọ bụ ya mere anyị ji enyere aka ịkụziri ndị na-agụ akwụkwọ anyị gbasara foto na ngwaahịa igwefoto site na nyocha na atụmatụ anyị. Havekwesighi ịkwụ ụgwọ nke ukwuu maka akụrụngwa gị ma ọ bụrụ na iji akụ nyocha anyị na-enye gị ebe a.
Akwukwo mmuta anyi nke CMOAPI bu nkwalite ohuru nke anyi ji ezi nganga ikwusa. Ọ bụ $ 2000 agụmakwụkwọ kwa afọ nke ezubere iji nyere ụmụ akwụkwọ aka iru agụmakwụkwọ na ọrụ ha. A ga-enye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ a afọ ọ bụla iji nyere aka kwụọ ụgwọ mmefu agụmakwụkwọ. Anyị na-achọ ịba okpukpu abụọ nke agụmakwụkwọ maka afọ na-abịa. Usoro mmuta akwukwo nke CMOAPI bu obere nnomi site na aka anyi iji nyere onye akwukwo aka imezu ochicho ha. Ọ bụrụ n’inwere mmasị na mmemakwụkwọ anyị ma chọọ isonye n'asọmpi a, biko gụọ ozi niile enyere n'okpuru.
Criteria ruru eru
·Nabatara ma ọ bụ na-aga na kọleji a kwadoro maka akwụkwọ na-aga n'ihu oge ma ọ bụ usoro gụsịrị akwụkwọ na United States.
·GPA nke kwadoro 3.0 (ma ọ bụ otu).
·A choro ihe akaebe nke idebanye aha ya na akara akara akara akara akara akara odi na bekee.
·Dee edemede banyere isiokwu a "Gịnị bụ Usoro nyocha & nkwekọrịta ahịa?"
·Ga-ezitere anyị akwụkwọ edemede gị na 7 ma ọ bụ tupu 2020th nke Disemba XNUMX.
·Nwere ike izipu edemede gị (na usoro MS Okwu naanị) site na email gaa na [email protected]
·Echefukwala ịkpọ aha, email, na akara ekwentị gị na ngwa gị.
·A chọkwara ka ị kpọọ nkọwa nke kọleji / mahadum na ngwa gị.
·Naanị edemede nke ga-apụ iche na okike ga-atụle maka asọmpi ahụ.
·A ga-akpọtụrụ onye mmeri ahụ site na ozi-e ma ga-aza ya n’ime ụbọchị ise iji nara ụgwọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na anabataghị nzaghachi n'etiti oge ahụ, aga - ahọrọ onye meriri ọzọ ịnata ihe nrite kama.
·Naanị edemede ndị a ga-enweta na tupu oge a kara aka ga-atụle maka asọmpi ahụ.
·A ga-ekpe edemede n’edepụta ọtụtụ paramita. Offọdụ n’ime ha bụ: ịpụ iche, ihe okike, iche echiche, uru nke ozi enyere, ụtọ asụsụ na ụdị wdg.
·A ga-ekwupụta ndị meriri emeri na Disemba 15th, 2020.
Amụma Nzuzo Anyị:
Anyị ji n'aka na enweghị ozi nkeonwe maka ụmụ akwụkwọ na-ekerịta, ma echekwara ozi nkeonwe niile maka ojiji maka ime ya. Anyị anaghị enye ndị ọzọ nkọwa nkọwa nwa akwụkwọ ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla, mana anyị na-edobe ikike iji isiokwu ndị enyere anyị n'aka n'ụzọ ọ bụla anyị chọrọ. Ọ bụrụ n’okpuru otu edemede na CMOAPI, ị na-enye anyị ikike niile maka ọdịnaya ahụ, gụnyere nwe ọdịnaya nke kwuru. Nke a bụ eziokwu ma anabatara nrubeisi gị dị ka onye mmeri ma ọ bụ na ọ bụghị. CMOAPI.com nwere ikike iji ọrụ niile edepụtara ka ebipụta ya ka ọ hụrụ na ọ dabara adaba yana ebe e lere anya na o kwesịrị ekwesị. A ga - enwetara ndị mmeri otu oge ha nwere ike ịnye ihe akaebe nke edebanye aha na mahadum, kọleji ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ akwadoro. Nke a gụnyere foto NJ nwata akwụkwọ ugbu a, ntụgharị akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ozi, akwụkwọ ozi akaebe, yana otu akwụkwọ ịgbaziri ego ahụ. A ga-ahọrọ onye mmeri nke abụọ ma ọ bụrụ na onye mmeri nke mbụ enweghị ike inye ihe akaebe ndị a.